ग्लोबल टी–२० : सोमपाल कामी र सन्दिप लामिछाने दुवै चलेनन ! || सुनौलो नेपाल
ग्लोबल टी–२० : सोमपाल कामी र सन्दिप लामिछाने दुवै चलेनन !
१९, २०७६ क्यानडामा जारी ग्लोबल टी–२० मा नेपालका फास्ट बलर सोमपाल कामीले डेब्यु गरेका छन्। एड्मन्टन रोयल्ससितको खेलमा मौका पाएका उनले प्रदर्शन भने निरासाजनक रह्यो। विनिपेग हक्सबाट खेलिरहेका सोमपाल बलिङमा खराव रहँदा अलराउन्डर छवि पनि जोगाउन सकेनन्। ८ औ नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै उनले ५ बल खेलेर केवल खातामात्र खोलेका थिए।
पहिलो ब्याटिङ गर्दै विनिपेगले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर एक सय ९५ रनको बलियो स्कोर खडा गर्न सफल रह्यो। एक सय ९६ रनको विशाल लक्ष्य लिएर उत्रेको एड्मन्टनले आक्रामक ब्याटिङ गर्दा हङकङका ब्याट्सम्यान अंशुमान रथले ५० बलमा ८७ रनको विष्फोटक इनिङ खेले। २ ओभर बलिङ गरेका सोमपालले ३३ रन खर्चेर निकै महंगा सावित भए।
उनले कुनै विकेट लिन सकेनन् । नवौं ओभरमा उनले मोहम्मद हाफिजबाट एक छक्कासहित १५ रन खाएका थिए। १५ औं ओभरमा उनको बलिङ झन् बिग्रियो र १८ रन खर्चिन पुगे। त्यसपछि उनलाई बलिङको जिम्मेवारी दिएन्। सो खेल एड्मन्टनले आठ विकेटले जित्यो। पहिलो म्याचमा विर्सनलायक प्रदर्शनपछि सोमपालले फेरि मौका पाउने सम्भावना निकै कमजोर बनेको छ।
सन्दीप पनि निरिह
सन्दीपले पनि यससिजन पहिलो पटक मौका पाए। अन्तर्राष्ट्रिय टी–२० स्टारको छवि बनाएका सन्दीप लामिछानेले पनि ग्लोबल टी–२० को यस संस्करणमा राम्रो सुरुवात गर्न सकेनन्। ब्राम्प्टोन वल्भ्सविरुद्धको म्याचमा उनले एक विकेट लिए पनि अत्याधिक रन खर्चिए। पहिलो ब्याटिङमा निम्त्याइएको ब्राम्प्टोनले २० ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा २ सय २२ रनको विशाल स्कोर खडा गरेको थियो। यद्यपी उनले पुरै ४ ओभर फाल्ने मौका पाएका थिए। जहाँ उनले ४४ रन खर्चिए। उनले न्यूजिल्यान्डका ब्याट्सम्यान कोलिन मुनरोलाई आउट गरेका थिए। ब्राम्प्टोनाक लागि हङकङका ब्याट्सम्यान बबर हायातले विष्फोटक इनिङ खेल्दै १८ बलमै ४८ रन बनाए। उनले ५ छक्का प्रहार गरेका थिए। २ सय २३ रनको लक्ष्य लिएर ब्याटिङमा उत्रिएको सन्दीपको टिम टोरन्टो नेसनल्सले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २ सय ११ रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतीय स्टार ब्याट्सम्यान युवराज सिंहले २२ बलमा ५ छक्का सहित ५१ रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन त्यो प्रर्याप्त भएन।
आइत, साउन १९, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस